Guddiga Dastuurka Baarlamaanka: “Mahiga ayaa caqabadda koowaad ku ah meel marinta dastuur loo sameeyo dalka” | Moment Union Somali Diaspora
Posted on December 24, 2011 by momentunion
Magaalada Muqdisho waxaa xalay ka dhacay markii ugu horeysay kulan ay isugu yimaadeen 36-Mudane oo qaabilsan dastuur u sameynta dalka, waxaana kulankaasi ay uga hadleen caqabado hortaagan dardar howlaha dastuur uu dalku yeesho.
Guddoomiyaha guddiga dastuur u sameynta wadanka Soomaaliya Xildhibaan C/qaadir Sheekh Ismaaciil ayaa sheegay go’aanadii ka soo baxay shirkooda, wuxuuna ka hadlay caqabadda hortaagan in dastuurka soo qoreen loo gudbiyo shacabka Soomaaliyeed uu yahay Shariif Xasan iyo ergeyga QM Ambassador Mahiga.
Waxa uu sheegay in Shariif Xasan uu faragelin ku hayo howlaha guddiga dastuurka, isagoona sheegay in arrimo aanu shaqo ku lahayn uu ku guda jiro oo ku aadan dastuurka dalka loo sameynayo, waxa uu sheegay C/qaadir Sheekh Ismaaciil inay soo diyaariyeen daraaft isla markaana ay dhexdooda ka soo xuleen guddi arrimahaasi ku howlan si uu u gaarsiyo shacabka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale Guddoomiyaha dastuur u sameynta dalka ayaa eedeyn u jeediyay ergeyga QM ee Soomaaliya Ambassador isagoona ku tilmaamay inuu qeyb ka yahay marin habaabinta xalka siyaasadda Soomaaliya, taasi oo uu sheegay inay ugu wacan tahay sida uu Mahiga u doonayo in mushkilada Soomaaliya.
“Mahiga ayaa caqabadda koowaad ku ah meel marinta dastuur loo sameeyo dalka” ayuu yiri C/qaadir Sheekh Ismaaciil oo sheegay Mahiga uu wado qorshe ka dhan sidii dalka looga hirgelin lahaa isla markaana Soomaalida uu ku jaha wareerinayo shirar aan wax dan ah ugu jirin dadka iyo dalka, balse isagu ku doonayo oo inuu jeebka ku dhubto kharajka ku baxaya shirka oo Qaramada Midoobay bixineyso.